महिनावारी हुँदा चामल कुट्न हुने, खान नहुने कस्तो संस्कार ? – Globalpatrika
गाउँमा एक जना दिदीले ओखलमा धान कुट्दै गरेको देखेँ। उहाँ छुई (महिनावारी) भएको थाहा थियो। सोधेँ, ‘तपाईं छुई हुनुभएको हैन? चामल कुट्न हुन्छ? छोइँदैन?’
उहाँले भन्नुभो, ‘अहँ, चामल छुई हुँदैन।’
‘यो सुख्खा हुन्छ।’
महिनावारी हुँदा शरीरबाट एक सातासम्म रगत बग्छ। उनीहरूलाई तागतिला खानेकुरा चाहिने, झोलिलो र पोसिलो खुवाउनुपर्ने यही बेला हो। हाम्रो सामाजले भने महिलालाई ख्याल गर्न सिकाउँदैन। छोरी, बुहारी, आमा, दिदीबहिनी जोसुकै होस्, उनीहरूको स्त्रीत्वको कदर गरिँदैन। उनीहरूलाई घरको ‘इन्जिन’ मानिन्छ जो निरन्तर घोटिइरहनुपर्छ। निर्जीव पाटपूर्जाको बरू स्याहारसम्भार हुन्छ, महिलाको सेवा-सुरक्षा कहीँ छैन। उल्टो तिरस्कार गरिन्छ, अछुत बनाइन्छ। चिसो, अँध्यारो, गुम्सिने गोठमा (खुल्लोमा) हुलिन्छ। अनि भनिन्छ- धर्म र परम्परा यही हो, यसैअनुसार चल।
सहरका केही ठाउँमा यो अन्धविश्वास कम भयो होला, तै अधिकांश घरमा लुकिछिपी हुर्किरहेको छ। नयाँ पुस्ताका छोरीहरू पनि आफ्ना आमाबा-दाइदिदीले लादेको परम्परामा हिँड्न बाध्य छन्। यसले छोरीहरूमा परेको शारीरिक र मानसिक असर कसैलाई वास्ता छैन। ‘रित त्याग्न हुन्न, देवता रिसाउँछन्’ देखि ‘चलन नमाने मान्छेले के भन्छन्’ भन्नेसम्म सुनिन्छ।
२०७३ असोजमा बाजुराको एउटा गाउँमा छाउगोठ बाढीले बगाउँदा तीन महिलाको ज्यान गयो। अस्ति भर्खरै हो, छाउगोठमा आमा र दुई छोराको मृत्यु भएको। यस्ता दुःखद घटना कति भए कति।कहिलेसम्म महिलाको यो दुर्गति देश-विदेशका अखाबारमा समाचार बनिरहने? के हामी यसैबाट चिनिँदै जाने हो? होइन भने किन परिवर्तनको प्रयास गर्दैनौं हामी?
हिन्दी फिल्म ‘प्याडम्यान’ का वास्तविक नायक अरुणाचलम मुर्गनाथमले कस्तो परिस्थितिमा प्रयास गरेका थिए? भारतको पिछडिएको गाउँका सामान्य व्यापारी थिए उनी। आफ्नी श्रीमतीले महिनावारी बेला फोहोर कपडा प्रयोग गरेको देखेपछि उनलाई दिक्दार लाग्यो। श्रीमती र दिदीबहिनीका लागि सफा र सुरक्षित प्याड बनाउन अनेक बाधा खेपे। घरपरिवार, समाजको बेइज्जती र गालीका बाबजुद आफैं प्याड बनाएर महिलाहरूलाई सहज बनाइदिए। अधर्मी संस्कृतिको पीडाबाट मुक्त गराए। उनको यो प्रयास आज विश्वका धेरै देशमा कदर भएको छ।
– सेतो पाटीबाट रत्ना न्यौपानेको लेख ।
ज्वाइँले ससुरालीमै आएर खुकुरी प्रहार गरे, तीनजना गम्भीर घाइते
ऋण तिर्न नसक्दा घरमा डोजर चल्यो
एकै रात तीन घरमा चोरी